Waxaan nahay soo saare ， ma nihin dhexdhexaad.
Hebei Besttone Fashion Co., Ltd oo ku taal Shijiazhuang, caasimada Gobolka Hebei, oo 280km u jirta Beijing.Waxaan leenahay shaqaale toos ah: 520 Bar shaqaalaha: 30 Qaybta jarista: 15 Dhamaadka: 25 Xirxirida: 30.
Anaga kaliya maahan warshado noo gaar ah laakiin sidoo kale waxaan la shaqeynaa dhowr warshadood.Waxaan haynaa wax soo saar ballaaran oo 150,000 ah bishiiba. Sidaa darteed, aad ayaan ugu xoogan nahay wax soo saarka, waan ku nasan karnaa haddii aad na siiso amarkaaga.
Laga soo bilaabo jarista, wax soo saarka shirkadaha baakadaha waxay leeyihiin qalab dhameystiran oo u gaar ah. Hadda waxaan ku tusi doonaa qalabkeenna si aan kuu siiyo faham dhammaystiran oo naga mid ah.
Marka ugu horeysa, waxaan leenahay qalab goynta dharka si otomaatig ah u goyn kara qaar ka mid ah dharka caadiga ah. Qaabab isku dhafan, waxaa sidoo kale loo jari karaa si sax ah si loo hubiyo cabirka qalabka iyo kordhinta hal-abuurka dharka.
Dhamaan noocyada sheybaarada iyo mashiinada qaaska ah ee noo fududeynaya inaan la macaamilno dhamaan noocyada khadadka ee dharka.Kama fiicna kaliya waxtarka tolida laakiin waxay sidoo kale wanaajineysaa bilicda sheyga. template.
Noocyo kala duwan oo mashiinno ah ayaa noo suurta geliya inaan sameyno noocyo badan, Noocan oo kale ah jaakad jilicsan / jaakad jilicsan, jaakad dhogorta / jaakad, jaakad maqaar / jaakad iyo wixii la mid ah.
Riixitaanka iyo xirxirashada iyo saadka waa kuwo aad xirfad u leh.waxay damaanad qaadi kartaa in alaabadaadu si habsami leh ku timaado goobta loogu talagalay.